Odisha Tours and Travels | I-Car Car Luxury kunye noTyhutha lokuThengisa iRhafu
Ukuqasha iimoto zethu zokunethezeka kunye nabaqeqeshi
Sinikela ngeemoto zokunethezeka kunye nabaqeqeshi ukuqesha amava akho kwaye kukunika ithuba lokufumana ezifanelekileyo kwiimeko zakho. Eyona nto ephambili ebalulekileyo kukuba ukwaneliseka.
Thatha ithuba lokubona ezinye zezinto ezibonakalayo zeBhubaneswar kunye neenxa zonke apho uvakashela i-Odisha.
I-EXTRA / HR
1 Dzire okanye efanayo 850 1500 140 14
2 Scorpio okanye efanayo 1000 1800 160 16
3 BRV okanye efanayo 1200 2200 200 20
5 Honda idolophu 1600 2600 260 25
8 Audi-A3 okanye i-BMW-X1 5000 10000 900 90
Usuku lomqhubi BATA: 200 kwi-Sl #1 ku-6, kunye ne-300 ye-7 kwi-9
I-Allowance Night (22: 00 ku-06: I-00 Hrs): R. 200 kwi-Sl # 1 kwi-6, kunye ne-R. 300 kwi-7 kwi-9
I-Half Halt Outstation: Rs. 300 kwi-Sl # 1 kwi-6 ne-R. 400 kwi-7 kwi-9
Iikhilomitha kunye neeyure ziya kuqalwa kwaye ziqedele kwindawo yethu yokuqeshisa (iGaraji ukuya kwiGaraji)
Emva kwe4 Hrs / 40 i-Kms slab, umyalelo wemizuzu ye-30 ivunyelwe. Ukuba nayiphi na isongezelelo ngaphaya kweso simboti esithethiweyo, i-8 Hrs / 80 i-Kms slab iya kusetyenziswa. Xa kugqitywe i-8 Hrs / 80 i-Kms slab, i-KM / i-Hour eyongezelelweyo iya kuhlawulwa njengeThuthi yoThutho.
I-Tax Tax, i-Tax Instituted & Parking iyahlawuliswa ngaphezu kwe-GST yangempela: 5%.
Ukusebenza kwithuba, umgama omncinane uya kubalwa i-250KM ngosuku lomhla okanye ikharityhulam, naluphi na ophezulu. Iintlawulo ziza kuba nge-KM ngasinye ngokwexabiso.
Ukuma i-A / C ihlawulwa kwi-Pro-rata.
Le ntlawulo elapha ngentla iya kuhlaziywa ukuba kukho ukwanda okukhulu kwintengo yexabiso kunye neyakhela irhafu.
Iikholeji ze-A / C
ziyafumaneka kunye nathi.
ukufumana iinkcukacha kunye nolwazi
Izaziso zeSMS ezizenzekelayo ngokuqinisekisiweyo kokubhuka.
Isilumkiso seSMS / seMeyili ngokunikezelwa kweMoto kunye neCuffer phambi kweeyure ze-02 ze-Pick-up.
Iphepha leNdaba leNkcazo, i-Bottle Mineral Bottle, i-Umbrella, i-Kit yoNcedo lweNkcazo, i-Ice-Box kunye nePhepha leTyhu eDry elinikezelwa kuzo zonke iimoto ngokubambisana.
Zonke iinqwelo zomoya-moya, ezingabhema, zicocekile kwaye zicocekile.
Ukuqabuleka, Ukutya, izithelo kunye neJusi kuya kulungiselelwa abathunywa kwisicelo kunye neentlawulo ezongezelelweyo.
Abaqhubi kunye / okanye uMmeli weNqwelo-moya waseSandle ephakamileyo kunye ne-Welcome Placard kwisikhululo se-Airport / iSitishi seSitishi ukuze bafumane iindwendwe kunye ne-Pick-up.
Iingqungquthela zeeNtshontsho zeNtsundu zanikezelwa ngumqhubi wezithuthi, othobekileyo, oqeqeshiweyo kunye nolwazi kunye neendlela kunye nenkampani yenkampani.
I-Co-Ordinators esebenzayo icacisiwe kwindawo yokusingatha iimfuno zabaxhasi kwiimeko kunye neenkomfa.
Ukujikeleza i-Clock-service ye-clock iyatholakala kwiiNkampani kunye neeSigqeba eziLawulayo, uhambo lokujonga indawo, uhambo olukhokelwayo kunye neziganeko ezizodwa.
Iinkonzo ezikhethekileyo zokuqasha iikhompyutha ziyafumaneka kwiMitshato.
Iinkcukacha zokukhethwa kweendwendwe zigcinwa kwi-database-basekelo yokubonelela ngeenkonzo ezingcono kwii-oda ezilandelayo.
Ukubhalwa kweemoto kufuneka kwenziwe phambi kweeyure ze-24. Nangona kunjalo, iDesk Operations Desktop Desk ingaqhagamshelana ukuba isithuthi siyadingeka kwiiyure ze-24.
Ngethuba lokwenza ukugcinwa kwe-intanethi, zonke iinkcukacha kwifom echanekileyo kufuneka zinikezelwe.
Ukubhuka kwe-On-line kuyakhawuleza ukulandela intlawulo yangoko. Nangona kunjalo i-Govt efanelekileyo. Imirhumo, iiToll Fee, Imirhumo yokuPaka kunye ne-Inter-State Border Permit Imirhumo kufuneka ihlawulwe ngumsebenzisi ngexesha lokunikezelwa kwekhati.
Zonke izibhengezo kunye nokuthengiselana okwenziwe kwiwebhusayithi yeSand Pebbles zixhomekeke ekuqinisekisweni kwakhona ngamatye aseSand. I-Sand Pebble inomdla wokuzisola ngokubhuka okuqinisekileyo ngokweentlawulo ezingaphezu kolawulo lwazo.
Imali yokuThengiswa kwe-15% yexabiso lokuqikelelwa kwerhafu iya kuhlawulwa ukuba ukubhuka kukhanselwe iiyure ze-06 ngaphambili. Xa ikhefu iphuma kwiGaraji, isixa esipheleleyo sokuqikelela sihlawulelwa ngumndwendwe.
Emva kokubhuka kwe-On-Line, Ungajonga isimo sakho ngeziko lethu leenkonzo ze-24Hrs.